Wasiir ka hadlay Safarkiisii Baydhabo
3 Jan 3, 2013 - 10:17:16 AM
Wasiirka Gaashaandhiga DF ayaa ka hadlay safar uu ku tagay Baydhabo isagoo sheegay inuu u kuurgalayay xaalada Ciidamada sidoo kalena uu kulamo la yeeshay Saraakiisha Ethiopia, kuwa AMISOM iyo Maamulka Gobolka Bay.
Cabdixakiin Maxamuud X. Fiqi oo saxaafada kula hadlay markii uu dib ugu soo laabtay maanta Muqdisho ayaa sheegay in safarkiisa oo qaatay laba casho uu ahaa mid lagu guuleysatay.
“Shacabka Baydhabo waa kuwo dowladnimo jacayl ay ka muuqato, waxaana u kuurgalay xaalada Ciidamada, dhawaan waxaan bilaabaynaa musaharaad aan siinayno ciidamada DF ee u sugan Gobolada Bay iyo Bakool” ayuu yiri Fiqi oo intaas ku daray inuu la kulmay saraakiisha hogaamiyaha ciidamada ku sugan Gobolka Bay.
Degmada Baydhabo ayaa waxay ka mid tahay Degmooyinkii Al-shabaab laga qabsaday horaantii sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo ay kuwada sugan yihiin ciidamada Ethiopia oo aan AMISOM ku jirin iyo kuwo ka kala socda Uganda iyo Burundi oo qayb ka ah howgalka AMISOM.
Ciidmadan waxay si wadajira ah gacan uga siiyaan ciidamada DF dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab oo mudo dheer isku dayaysay inay xukunka ka rido dowladii KMG ahayd ee xiligeedu dhamaaday.
Saraakiisha Hogaaminaysa ciidamadan ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin gacan ka geystaan sidii Al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga harsan tahay Gobolada Bay iyo Bakool oo ku yaala Dhinaca Koonfur-galbeed ee Somalia.
Wasiirka Difaaca DF ayaa amaan u jeediyay ciidamada AMISOM iyo kuwa Ethiopia ee ku sugan degmada Baydhabo, isagoo ku amaanay qaybta ay ka qaateen sidii Al-shabaab looga saari lahaa degmadaas, loona adkeyn lahaa amaanka guud ee Gobolada Bay iyo Bakool.
Gudoomiyaha Gobolka Bay, C/fitaax Maxamed Geesey oo isaguna ka hadlay safarkii uu Wasiirka Difaaca iyo Xildhibaano la socday ay ku tageen degmada Baydhabo, isagoo sheegay in safarkii wasiirka uu ahaa mid guul ku dhamaaday.